Wararkii ugu dambeeyay Darawel Gaari oo lagu dilay G/Galgaduud
You are at:Home»Warkii oo Dhan»Wararka»Wararkii ugu dambeeyay Darawel Gaari oo lagu dilay G/Galgaduud
Faah faahin dheeraad ah ayaa kasoo baxeysa dil ka dhacay Deegaan ku yaalla Xadka kala qeybiya Soomaaliya iyo Itoobiya,gaar ahaan Deegaan ku yaalla Gobolka Galgaduud,halkaasi oo lagu lagu dilay Darawel Gaari.
Rag hubeysan oo maleeshiyo beeleed ayaa wadada u galay Darawalka oo waday gaari nooca xamuulka qaado ah, xili uu marayay meel lagu magacaabo Riiga Ceel-habreed oo ku taalla xuduudka Itoobiya iyo Galgaduud.
Dad ayaa ku warramay in Darawalka waday gaariga uu kasoo ambabaxay Magaalada Berbera ee Somaliland, isagoo kusii jeeday Magaalada Baladweyne ee Gobolka Hiiraan, hayeeshee wadada loo galay, kadibna sidaas lagu dilay.
Marxuumka la toogtay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdixakiin Xaashi, isagoo kamid ahaa Darawalada ka shaqeeya Baladweyne, waxaana la sheegayaa in loo dilay arrimo la xiriira aano qabiil.
Degmooyin iyo Deegaanno ka tirsan Gobolada Hiiraan iyo Galgaduud, ayaa waxaa horey uga dhacay dilal iyo weeraro ay geysteen rag hubeysan oo maleeshiyaad ah, waxaana falalkaas ay ahaayeen kuwo la xiriira aano beeleed.